Na Delta, E Jidela Onye Ọkada Kwasoro Onye O Bu n'Ọgbaatumtum Iko n'Ike - Igbo News | News in Igbo Language
Na Delta, E Jidela Onye Ọkada Kwasoro Onye O Bu n'Ọgbaatumtum Iko n'Ike
May 9, 2021 - 15:13 Updated: May 30, 2021 - 12:18
Ọ na-abụ agadi nwaanyị kachie ntị wụọ aja, e bute ozu ya n'ofe nke ọzọ.
Ka ọ dị taa, otu onye ji ọgbaatumtum akpa ego na steeti Delta, bụ nke a maara dịka Ọkada, nọ ugbua wee na-akwa ngarammara, ma na-atakwa ikikere eze banyere ndụ ya na akparamagwa ya, dịka ọ machara otu nwaanyị o bu n'ọgbaatumtum elu n'ike.
Onye Ọkada ahụ, bụ Maazị Michael Ovie (gbara ahọ iri atọ na isii, ma bụrụkwa onye obodo Ọghara, dị n'okpuru ọchịchị 'Ethiope West' nke steeti ahụ) ka e kwuru na o ji ngwa ọgụ dagà wee yie nwa agbọghọ ahụ o bu n'ọgbaatumtum ya égwù, ma rie ya ọkọmbọ n'iké.
Akụkọ kọrọ na nwoke ahụ buru nwata nwaanyị ahụ wee gbagide n'ụzọ, tinyezie isi n'ọhịa; ma mgbe o ruru ebe ahụ, o weputazịrị daga ahụ wee yie ya égwù na ọ ga-asụgbu ya ma ọ bụrụ na o kweghị emepere ya. O wee si etu ahụ wee mazụrịa nwata nwaanyị ahụ.
Ya bụ oke mkpi na-agbara ọha ewu bùrù ụzọ wee nakọrọsịa nwaanyị ahụ ihe dị iche iche o nwere, ma ekwentị ya na ihe ndị ọzọ, tupu o wee tụọ ya n'ala, ma kọrịa ya n'iké.
Ụfọdụ ndị obodo ahụ maara onye nwoke ahụ bụ gbàrà akaebe na ọ kwasola ọtụtụ ụmụnwaanyị o bu n'ọgbaatumtum iko n'ike ọtụtụ ugboro, nke gosiri na nke ahụ abụghị nke mbụ ọ na-eme ụdị ihe dị etu ahụ; naanị na iko ya ejula, nke mezịrị na ọ lapụghị ya na nke ikpeazụ a.
Ka o sila dị, n'ajụjụọnụ a gbara nwoke ahụ oge onyeisi ndị uweojii na steeti ahụ, bụ CP Ari Muhammed Ali na-akpụgharị ya n'isi ụlọọrụ ndị uweojii steeti ahụ; o mèrè ka a mara na ọ bụ naanị nwaanyị ahụ ka ọ kwasogoro iko n'iké na ndụ ya. Ọ gara n'ihu kọwaa na ihe ahụ o mere bụkwanụ n'ihi ihe ụmụnwaanyị na-eme ya ka ọ chọrọ ka o megwara, naanị na ekwensu batazịrị n'ime ya, o wee mefèzie ya ófè.
Dịka o siri kwuo, ụmụnwaanyị agbawaala ya obi ọtụtụ oge, nke na ọ na-abụ ọ gbachaa ha asa, ha richaa ego ya, ha awaa, ha agaghị ekwe mepere ya; ihe ahụ wee na-ewute ya na mkpụrụobi, nke mezịrị o ji chọọ isi n'ụzọ ahụ wee bọọ ọbọ ihe ha mere ya, n'ihi na nwaanyị ahụ o mere ihe ahụ yìrì otu onye n'ime ụmụagbọghọ ahụ kpagoro ya ụtazị n'isi.
O kwuru na ọ malitere ịkwa arịrị banyere ihe ahụ o mere kemgbe ahụ o mechara ya, ma na-ekpekwazịrị Chineke ka ọ gbaghara ya n'ihi na ọ maghị ụma, tinyekwuoro na ọ bụ akaọrụ ekwensu.
N'okwu nke ya, onyeisi ndị uweojii ahụ, bụ Maazị Ali mere ka a mara na ha nwụchikọrọ ya bụ nwoke site na njikọaka ndị ọrụ agha ala Nigeria n'elekere iteghete nke anyasị, ma kwuo na ọ bụghị naanị na ọ na-eji ọkada ya eburu ụmụagbọghọ wee baa n'ime ọhịa n'abalị ebe ọ ga-anọ wee kwaso ha iko n'ike; kama na ọ na-ezukwa ụmụnwaanyị ahụ ohi, site n'ịnakọrọsị ha àkpà ha na ihe ndị ọzọ dị iche iche ha ji ebe ahụ.
O kwuru na oge ahụ ha jidechara nwoke ahụ, na ha nwètàsịrị ụfọdụ ihe dị iche iche o zutere site n'aka nwaanyị ahụ ọ kwasoro iko n'aka ya, nke gụnyere ekwentị na ihe ndị ọzọ.
CP Alị gakwara n'ihu kwuo na e nwetara 'sim card' iri na asatọ, ekwentị asatọ, ọkụ (torch), ATM ụlọakụ U.B.A. atọ, na ihe ndị ọzọ n'aka nwoke ahụ, ma kwuo na a ga-akpụpụ ya na ndị omekoome ndị ọzọ e jidere ụlọikpe, ngwangwa e mechara nnyocha banyere arụrụala ha dị iche iche